Chii chinonzi Reddit Goridhe?
Sezvo yakatanga kudzoka muna2005, iyo yekugovana paruzhinji nzvimbo Reddit yakura kuti ive nzvimbo inofanirwa-kuona yemamiriyoni evashandisi pasi rese. Iyo ndiyo nzvimbo inotaridzika yenhamba isingaperi yenzvimbo niche (vamwe zvakanaka, vamwe zvakaipa), apo vashandisi vanogona kugovana kutumira, mifananidzo, mavhidhiyo uye nezvimwe nevamwe sevashandisi vepfungwa.
Kune avo chaiwo maReddit akapindwa muropa, rakakosha kunyoreswa sevhisi rinogona kukanzurisa iyo Reddit yekuona ruzivo. Iyi sevhisi, yaimbodaidzwa kuti Reddit Goridhe asi zvino yashandurwa zita rekuti Reddit Premium, inopa zvakasiyana siyana zvinobvumidzwa kune vakajairwa Reddit vashandisi, sezvatichatsanangura zvimwe.
Kana iwe wakambove "wakabatanidzwa" nekuda kweposita uye usina chirevo icho chinokupa iwe, heino mhinduro yako: Iyo ndiyo yekupedzisira nzira yekutsigira Reddit, kukuwanira mashoma mashoma ekuita.
Chii chinonzi Reddit Goridhe? Reddit Goridhe, ikozvino inonzi Reddit Premium kujekesa, ishumiro yebasa yenzvimbo yeReddit nzvimbo, yakavhurika kune vese vashandisi uye inodhura $ 5.99 pamwedzi.
A Reddit Premium nhengo pachayo inowana mushandisi mukana wekudzima Reddit ads, ratidza tsika mascot (yakanzi "snoos"), shandura nzvimbo misoro, gadzira nhengo-chete subreddits, wana mukana wePrimari-chete r / lounge subreddit, uye ona zvirevo zvitsva zvinoratidzwa (zvinobatsira vashandisi veReddit simba).
Iwe unozowana bheji chairo kuti uratidze nhengo yako yePremium pa profil yako - yakanakira vavhimi ve Clout. A Reddit Premium inhengo inokupa iwe Reddit Coin pamwedzi, iyo yaunogona kushandisa ku “gilda” kana kuhwina yezvinotumirwa kana zvaunotaura zvaunoda kutsigira.
Iwe unowana 1000 Reddit Coin paunotanga kunyoresa, iine mazana manomwe pamwedzi pamwedzi wega wega unowedzera iwe unoramba uchinyoresa. Izvi zvinogona kushandiswa kupa vamwe vashandisi nevo yavo zvigaro, neReddit Sirivheri, Goridhe, uye Premium mibairo inowanikwa. Unogona kutenga mamwe mari, kana uchifanira kudaro.
Reddit Goridhe, sirivheri, uye Platinamu: Reddit Kubatsirwa Kunotsanangurwa
Iwe unogona kushandisa chero huwandu hweReddit Coins iwe waunoda pane chinhu kana chirevo. Nhamba yemari iyo iwe yaunofunga kushandisa ichaona mubairo wakapihwa kune iye Reddit mushandisi.
Mubairo weSilver uri pasi pechinyorwa, unodhura 100 Reddit Coins. Izvi zvinoratidza mubairo unopokana neposvo kana chirevo, zvisingapi zvimwe zvikwanisiro kunze kwekungotsigira tsigiro yemushandisi iyeye kuReddit
Kana iwe uchida kutora zvinhu mberi, unogona kupa chipo cheGoridhe pachinzvimbo. Ehe, iro zita rekare reReddit Premium kunyoresa sevhisi rinogara mune uyu mubairo, uchipa unogamuchira vhiki yeReddit Premium, 100 Coins, uye Goridhe leboel padyo nepositi yavo. Izvi zvinokubhadharira iwe, iwe gifter, 500 Reddit Mari.
Kana iwe uchinyatsoda kuratidza rutsigiro rwako kune mushandisi, iwe uchazoda kupa chipo chekutanga. Izvi zvipo mwedzi wePremium nhengo kune mushandisi iyeye, pamwe chete mazana manomwe emadhinari uye Platinum chinyorwa padanho ravo. Izvi zvichakubhadhara iwe 700 Coins, saka uchafanira kuchengetedza kuti ushandise izvi kana kutenga imwe Reddit Mari kuti uifukidze.
Kunyange zvisingawanzo kuona, iwe unogona zvakare kupawo mubairo weArgentium, uchiita zviuru makumi maviri zveReddit Coins. Izvi zvinopa unogamuchira 20,000 Mari Coin yavo, pamwe nemwedzi mitatu Reddit Premium nhengo.
Kune mamwezve madiki mibairo iripo, inodhura marevhuru akasiyana eReddit Coins kune chipo. Izvi zvinouya pamwe nekwavo, nekuti kubva pane zvinyorwa kusvika kushoma yeReddit Coin zvipo.
Maitiro Ekutenga Reddit Premium Uye Reddit Mari
Sezvatareva, kune nzira shoma dzekuwana Reddit Premium kunyoresa. Iwe unogona kutenga imwe pachako, kana iwe unogona unayo iyo chipo kwauri sechikamu chemubhadharo weReddit Gold kana wekutanga.
Kana iwe ukatenga Reddit Premium kunyorera, iwe unowana huwandu hweMari yekushandisa pane vamwe vashandisi. Nekudaro, izvi zvinogona kunge zvisina kukwana kuti pakarepo upe Reddit Platinum mibairo, saka iwe ungangoda kutenga kuwedzera Reddit Coins zvakasiyana.
Iwe unogona kutenga zvese kubva kuReddit menyu kana iwe ukasaina.
Saina-kupinda muakaundi yako yeReddit, dzvinyira zita rako rezita kumusoro-kurudyi, wobva wadzvinya chero Reddit Mari or Reddit Premium. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo Tora Mari bhatani kuti utenge nekukurumidza kutenga mamwe maReddit Coins kuti utenge nekukurumidza kutenga Reddit Coins panzvimbo.
Kutenga Reddit Premium, tinya Tora Premium bhatani Reddit Peji yekutanga yekutengesa peji.
Izvi zvicharatidza zvinowanikwa zviripo zvekutenga dunhu rako, kusanganisira PayPal kana yakananga kadhi kubhadhara. Sarudza yako yaunoda sarudzo yekubhadhara, wozopedzisa kutenga sekurairwa.
Kutenga mamwe maReddit Goridhe mari, dzikisa pasi uye sarudza imwe yesarudzo iripo pane Reddit Coins yekutengesa peji. Idzo sarudzo dzekutenga idzi Reddit Coins dzinosiyana kubva pa500 Reddit Coins (ye $ 1.99) kusvika pakukwira kwemakumi mana emadhora (kwe $ 40,000).
Iwe unoendeswa kunongedzo dziripo dzekutenga dunhu rako. Sarudza iyo yekubhadhara sarudzo yaungada kushandisa, wozotevera mirayiridzo yeku-screen kupedzisa kubhadhara.
Iyo Reddit Premium inhengo kana iyo yakawedzerwa Reddit Coins iwe yaunotenga inozowedzerwa kune yako account nekukurumidza mushure mekubhadhara kwakanaka.
Maitiro Ekupa Chipo Reddit Miti Kune Vamwe Vanoshandisa
A Reddit Premium inhengo inokupa dzakasiyana-siyana Reddit Coins kuti ushandise, uye iwe uchazoda nzira yekuishandisa. Nzira chete yekuita izvi ndeyekuparadzira hupfumi uye nekuishandisa kupa vamwe vashandisi neReddit mibairo.
Iwe unogona kuita izvi pane chero kutumira kana kutsanangura mune chero subreddit pane Reddit saiti.
Pasi pekutumira imwe neimwe kana chirevo, iwe uchaona a Ipa Mubayiro bhatani. Dzvanya izvi kutanga kuita zvipo.
Izvi zvichaunza iyo Ipa mubairo menyu sarudzo, kwaunogona kusarudza mubayiro waunoda kupa. Sarudza mubairo wako waunofarira uye wedzera meseji yakasarudzika yeanogamuchira, kana tinya Ita kuti chipo changu chisazivikanwe kugara chakavanzika. Press Next kuenderera mberi.
Kana iwe usina mari yakakwana yeReddit, iwe uchakumbirwa kutenga mamwe mari panguva ino. Kana zvisina kudaro, Reddit inokukumbira iwe kuti utarise chipo. Izvi zvinopa chipo mushandisi pamwe nematanda ane hukama nemubhadharo uyu nekukasira.
Kuwana Izvo Zvakanyanya Kunze KweReddit
NeReddit Premium kunyoreswa, kwete iwe chete iwe unowana kubatsirwa kweasina-mushandisi ruzivo ruzivo uye akasiyana mimwe nhengo-mitezo chete, asi iwe unowana zvakare kushandisa yako yemahara Reddit Coins kutsigira vamwe vashandisi uye kupa zvishoma kudzokera kune yako yaunoda. Reddit nharaunda.
Kana iwe uchida kuwana zvakawanda kunze kweReddit mushandisi ruzivo, unogona kushandisa iyo Reddit yepamusoro yekutsvaga chimiro kuti uongorore pasi zvawatumira uye zvimwe zvirimo zvaungave wakarasikirwa nazvo. Maitiro akashata paReddit haawanzo kubvumirwa, saka iwe ungangoda kuongorora a Reddit shadowban kana yako machira asiri kuwana kutarisirwa kwavo.
Dhawunirodha Iyi Inonakidza Yekutanga 4K Themes ye Windows 10
32 yeYakanakisa Webhusaiti Dhizaini Ekukurudzira Iwe muna 2020
Chii chinonzi Reddit Karma (uye Maitiro Ekuiwana)
Maitiro Ekukanzura kana Kumisa YouTube Premium Kunyorera
Zvakanakisa Webhu Saiti Vanopa
Tora Mahara Kunyorera kweSony LIV, ZEE5, Hotstar, ALT Balaji, Eros Zvino, Netflix uye Prime Vhidhiyo muna 2021
'RollerCoaster Tycoon Touch' Cheats: Mazano Ekuwana MaThikete Akawanda, Mari Nemakadhi